SuperTux 0.6.2 inosvika nemepu nyowani yekupemberera makore makumi maviri | Linux Vakapindwa muropa
Pfungwa yakasimba yeLinux-based operating system haisi yemitambo yemavhidhiyo. Iyo ine zvimwe zvakanaka, uye pakati pavo tine nharaunda inokwanisa kugadzira ese marudzi esoftware, pakati payo isu zvakare tine mitambo. Imwe yadzo yakavakirwa pane zvekare klassiske Mario mazita (iwo echinyakare, kwete iwo mota), uye Super Tux 0.6.2 Yakaburitswa ino vhiki ino neimwe yekuvandudza kwakakosha, senge mepu nyowani.
Izvo zvakakodzera kuti utaure kuti vavaki vayo vari kupemberera. Muchokwadi, mune rondedzero yenhau ivo vanotaura kuti iyo nyowani mepu yakawedzerwa kune pemberera makore makumi maviri emutambo. Kune rimwe divi, ivo vakatora mukana wekuvhurwa kuunza kumwe kunatsurudzwa, sekuburitswazve mifananidzo. Pazasi iwe une yepamutemo nhau runyorwa uye dhawunirodha zvinongedzo zvemutambo uyu nezve pombi yemvura?
Chii chitsva muSuperTux 0.6.2
Mepu nyowani yenyika, "Revenge MuRedmond" iyo inopemberera makore makumi maviri eSuperTux, uye inosanganisira vavengi vatsva nezvidhoma.
Nyowani uye yakavandudzwa mamiriro uye goblins.
Kukwidziridzwa pamatanho mazhinji muIcy Island uye nesango nyika.
Yekukurumidza kuvandudza kwematanho ayo anoshandisa huwandu hukuru hwemataira emarara.
Yakagadzirisa nyaya yakakonzera kuti zambuko musango nyika risaratidze mune dzimwe nguva.
Vashandisi vanofarira kuyedza iyo nyowani SuperTux 0.6.2 mepu uye nezvimwe zvinhu zvitsva, senge iwo magirafu anovimbisa kuve akawedzera stylized, vanogona kuzviita. kurodha pasi mutambo kubva kune yepamutemo kurodha peji, iyo yatinogona kuwana kubva Iyi link. Mariri, izvozvi tinogona kudhawunirodha mutambo mune yayo AppImage vhezheni, asi pane zvakare chinongedzo chiripo kurodha pasi kubva kuFlathub. Tinogona zvakare kuiisa kubva kune yayo Snap package (Sudo snap yekuisa supertux), chimwe chinhu icho pachezvangu chinoita senge nhau kwandiri sezvo mapakeji akaunzwa neCanonical kazhinji anotora nguva yakareba kuti awedzere
SuperTux yatove neayo shanduro nyowani Uye kana yasvika, inogona kushanda sekukwazisa kweKisimusi. Isu kudivi redu, tinodzorera makorokoto uye tinokushuviraiwo zuva rekufara rakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » SuperTux 0.6.2 inosvika nemepu nyowani yekupemberera makore makumi maviri